Shiinaha YASKAWA HANDLING ROBOT MOTOMAN-GP200R warshad iyo soosaarayaasha | Jiesheng
MOTOMAN-GP200R, oo ah 6-dhidib toosan oo isku-dhafan oo isku-dhafan, robot maaraynta warshadaha, oo leh hawlo faro badan iyo qaybo muhiim ah, waxay dabooli karaan baahiyaha adeegsadayaal fara badan, sida qabashada, gundhigga, isku imaatinka, shiidi, iyo ka shaqeynta qaybaha ballaaran. Xamuulka ugu badan waa 200Kg, qiyaasta ugu badan ee tallaabada waa 3140mm.
Isticmaalka maareynta aalado dhinacyo badan oo wax soo saar ah ayaa cadeeyay inay door muuqda ku leedahay hagaajinta heerka otomaatiga wax soo saarka, hagaajinta wax soo saarka shaqaalaha iyo tayada wax soo saarka, faa'iidooyinka dhaqaale, iyo hagaajinta xaaladaha shaqada ee shaqaalaha.
MOTOMAN-GP200R, 6-dhidib toosan oo isku-dhafan oo isku-dhafan, robot maaraynta warshadaha, hawlo faro badan iyo qaybo muhiim ah, waxay buuxin karaan baahiyaha adeegsadayaal fara badan, sida qabashada, gundhigga, isku imaatinka, shiidi, iyo ka shaqeynta qaybaha ballaaran. Xamuulka ugu badan waa 200Kg, qiyaasta ugu badan ee tallaabada waa 3140mm, waxayna ku habboon tahay golaha xakamaynta YRC1000. Isticmaalka waxaa ka mid ah maaraynta, qaadista / xirxirida, pallatizing, isku imaatinka / qeybinta, iwm.
Ku GP200R robot maaraynta warshadaha wuxuu yareynayaa tirada fiilooyinka udhaxeeya aaladaha aaladaha iyo koontaroolka, wuxuu hagaajiyaa joogtaynta iyadoo la siinayo qalab fudud. Shelf ayaa si wax ku ool ah u isticmaali kara booska, oo wuxuu ku ogaan karaa qaabka wareegga midabada leh iyada oo loo marayo isku dhafka aalado kale. Way ku habboon tahay in lala shaqeeyo aaladaha kale.
1760Kg 5.0kVA 90 ° / seken 85 ° / seken
85 ° / seken 120 ° / seken 120 ° / seken 190 ° / seken
Marka laga fiirsado alaabooyinka ay soo saareen robotyada adduunka sannadihii la soo dhaafay, ayaa Taxane GP a robot maaraynta warshadaha tikniyoolajiyadda waxay ku horumaraysaa jihada sirdoonka, qaab dhismeedka iyo nidaaminta. Isbeddellada horumarineed ayaa inta badan: qaabeynta iyo dib u qaabeynta qaab-dhismeedka; xakamaynta tiknoolajiyada Furfurnaanta, Kombiyuutarka iyo isku xirka nidaamka; digitization-ka iyo baahinta tiknoolajiyada adeegga servo; wax ku oolka farsamada dareemayaasha dareemayaasha badan; ku habboonaanta naqshadeynta deegaanka shaqada iyo dabacsanaanta hawlgalka, iyo sidoo kale isku xirka iyo sirdoonka nidaamka.
Hore: YASKAWA DHAQAALAHA ROBOT MOTOMAN-GP180
Xiga: YASKAWA robot maaraynta MOTOMAN-GP225
Qabashada Gacanta Robot, Robotka Gacanta otomaatiga ah, 6 Axis Qabashada Robot, Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, Aaladda otomaatiga ah ee Robot, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka,